Soomaali (Somali) - Tukwila - Community Connections - King County Metro Transit - King County
Fadlan gacan ka geyso qeexida xalka suurtagalka ah ee la soo jeedin doono:
La kulan baahiyaha dhaqdhaqaaqa bulshada ee lagu aqoonsaday bulshada
Waa adeeg lagu guuleysto, adeegyo si wanaagsan looga faa'iideysto oo ka dambeeya wejiga barnaamijka imtixaanka
Miyaad ku nooshahay degmada Tukwila? Waxaan jecel nahay caawimaaddaada si aan u hagaajino sida aad ku tageyso meesha aad ugu baahan tahay inaad u tagto bulshadaada!
King County Metro wuxuu sahminayaa xalka dhaqdhaqaaqa cusub ee deggeneyaasha ku nool iyo soo-booqdayaasha Tukwila. Metro waxay la shaqeeyaan dawladaha hoose iyo shuraakada bulshada si ay u horumariyaan xalal gaadiid casri ah meelaha King County ee aan haysanin kheyraadka ama kaabayaasha lagu taageerayo howlaha joogtada ah, baska. Habkaan, King County Metro iskaashi lala yeesho City of Tukwila inay u keenaan xalalka dhaqdhaqaaqa dadka deggan Tukwila. Jiilaalkii la soo dhaafay waxaan weydiinay dadka deggan Tukwila si ay nooga caawiyan sidii aan ku ogaan lahayn baahiyaha dhaqdhaqaaqa deegaanka ee laga yaabo in lagu buuxiyo barnaamijka Community Connections. Waxaan u adeegsanay jawaab celinta aan helnay si aan u horumarinno xalka iman kara ee barnaamijka Community Connections gacan ka geysan karo bixinta. Waxaan ka raadin doonnaa jawaab celin bulshada ka socota fikradahan bilaha Sebtember iyo Oktoobar.
Sabab degmada Tukwila?
Tukwila wuxuu ku xiran yahay shabakadda gaadiidka gobolka. In kasta oo ay taasi jirto, dadka deggani waxay u leeyihiin helitaan xaddidan sababta oo ah halka ay ku nool yihiin iyo caqabadaha jidheed (sida jidka weyn I-5 iyo I-405).
Deganeyaal badan ayaa ku nool meelo aan masaafo u lugaynayn masaafada. Ikhtiyaariyada gaadiidka hadda ma yimaadaan badanaa ama si aan toos ahayn. Sidoo kale, baarkinka iyo fuushii Tukwila International Boulevard Station and Interurban Avenue South waxay ku dhow yihiin inay buuxsamaan subaxnimadii hore. Laba mashruuc oo kale oo ka socda aagga:
waa barnaamij wayn oo bixiya dookhyo lagu dhimaayo wadista keli socodka iyo kor u qaadista hakashada. Barnaamijku wuxuu kaloo bixiyaa macluumaad ku saabsan Metro’s adeegyada cusub ee aagga.
Inbadan oo kusaabsan In Motion…
Metro Waxay ballaarineysaa barteeda ay ku leedahay Koonfurta Tukwila iyadoo ballaarineysa cabir ka si dhul loogu helo 250 basas dheeraad ah. Goobta kumeelgaarka ah waxay furmi doontaa 2020 iyadoo nooca ugu dambeeya la dhamaystiri doono 2025.
Inbadan oo ku saabsan saldhiga South King County…
Codkaaga La Maqlo
Ku lug lahaanshaha bulshada
Iyada oo qayb ka ah mashruucan, waxaa jiray dadaalo horseed u ah bulshada iyo sahaminta sanadka 2018 si loo ogaado baahiyaha dhaqdhaqaaqa gudaha magaalada Tukwila. King County Metro oo ay weheliso Kooxda Shaqada ee daneeyayaasha ka mid ah magaalada Tukwila deganeyaasha, iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa sahminaya xalal cusub oo dhaqdhaqaaqa loogu talagalay degganeyaasha iyo booqdayaashaba magaalada Tukwila.
Haddii aad ku nooshahay ama booqato magaalda Tukwila fadlan kaqeybgal xogururintayada si aan uga caawino go'aaminta xalka xawaaraha dhaqdhaqaaqa uu horay usocdo halkan.
Inbadan oo kusaabsan Have a Say
U dir Ryan emayl
ama wac 206-477-5044
Ku Saabsan Xiriirka Bulshada
Community Connections wacyigelinta ayaa qayb ka ah Metro’s Qeybta Dhaqdhaqaaqa. Metro waxaa ka go'an inay noqdaan wakaalad dhaqdhaqaaq oo bixisa gaadiidka dadweynaha oo iskudarta xulashooyinka safarka cusub. Markaad noqoto hay'ad dhaqdhaqaaqa, Metro waxaa loo habeeyay inuu fuliyo himiladeenna: Bixinta adeegyada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee gaadiidka dadweynaha iyo hagaajinta dhaqdhaqaaqa gobolka iyo tayada nolosha degmada King. Community Connections wacyigelinta ayaa gacan ka geysata aragtidan iyada oo la aqoonsanayo lana hirgaliyo xalal cusub oo dhaqdhaqaaq hal abuur leh oo dhameystiraya isu socodka dadweynaha degmada King.